China EV Charging Station Wall-Mounted Electric Charger Wallbox EV Charger Point 40A fanamboarana sy orinasa | Teknolojia iraisana
Taratasy fanamarinana: ETL
Hery famoahana: 3.6kW, 7.6kW, 9.6kW, 11.5kW
Fampidirana ankehitriny: 16A, 32A, 40A, 50A
Volkano fampidirana: 240 ± 10%
Halavan'ny tariby: 18ft (25ft tsy voatery)
Fitaovana efa mihazakazaka tsara, mpiasa manana fidiram-bola mendrika, ary orinasa avo lenta aorian'ny varotra; Izahay koa dia olon-tiana lehibe niray hina, na iza na iza mikiry amin'ny tombotsoan'ny fikambanana "fampiraisana, finiavana, fandeferana" ho an'ny Factory fivarotana tsara indrindra EV Charging Station Wall-Mounted Electric Charger Wallbox EV Charger Point 40A, raha mitady avo ianao kalitao, fandefasana haingana, tsara indrindra aorian'ny fanampiana sy mpamatsy sanda tsara ao Shina ho an'ny fifandraisana maharitra, dia izahay no safidy mahomby indrindra hataonao.
Anaran'ny modely EVC10-03C1C EVC10-07C1C EVC10-09C1C EVC10-11C1C
Fandraisana ankehitriny 16A 32A 40A 48A
18ft tariby manome tariby (tariby famakiana 25ft tsy voatery)
Ny fonenana vita amin'ny lamaody dia tafiditra ao anatin'ny maritrano efa misy ary voaaro tsara amin'ny tontolo ivelany. Vonona vonona amin'ny tambajotra (LAN, 4G, na Wi-Fi) hifandray amin'ny rindrambaiko fitantanana OCPP manaraka ny antoko fahatelo. Ny fikirakira fametrahana rindrambaiko miorina amin'ny rindrina na mijoro irery izay miasa ao anatin'ny fahaizanao mihodina mba hampihenana ny vidin'ny fametrahana. Ny fanamarinana RFID azo antoka dia mamela ny fidirana amin'ireo mpamily EV.
LCD lehibe sy tariby lava:
4.3 ″ LCD hanehoana ny angon-drakitra rehetra momba ny fiara mandritra ny fijanonana. Afaka mahita ny fanjakana misy fiampangana, ao anatin'izany ny ankehitriny, ny herinaratra ary ny mari-pana. Tafiditra ao anaty boaty ny visy ka aza manahy sao milatsaka ny écran. Ny tariby 5 metatra dia mamela toerana malalaka eo anelanelan'ny fiaranao sy ny tobim-piantsonana.
Fifandanjana sy fiarovana:
Ny tobim-piantsonana dia manana haavon'ny herinaratra izay mandanjalanja ny gara rehefa miasa ny fitaovana elektrika marobe. Noho izany dia afaka miasa amin'ny onja tsy tapaka ny tobin-tseranana, hisorohana ny fiatoana sy ireo loza hafa azo antoka azo avy amin'ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny.
Ny vokatray rehetra dia ETL sy CE, azo itokisana ny kalitao. Plug SAE J1772 ™ mahazatra izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fiara elektrika mifono herinaratra sy hybrid.
1. MIARO NY EV & PHEV REHETRA: mifanentana tanteraka amin'ireo fiara mifono herinaratra rehetra sy ireo fiara mifono vy Hybrid Electric plug-in amidy any Etazonia sy Kanada. Anisan'izany: Chevy Bolt, Leavel Nissan, Ford Fusion, BMW i3, Chevy Volt, Toyota Prius, Tesla (miaraka amin'ny adapter).
2. FAMPANDROSOANA FARANY & FAMONJENA Mora: miakatra hatramin'ny 8x haingana kokoa noho ny charger Standard AC Level 1 EV amin'ny tombana fanampiny 25-35 kilaometatra eo ho eo isan'ora. Namboarina ho fanamorana ny fametrahana sy ny bracket fametahana manerantany.
3. Drafitra AMPERAGE & COMPACT COMPACT MANARAKA: Ampifanaraho ny Output Max ankehitriny (48A, 40A, 32A, 16A) hanohanana ny fanamoriana marobe (48A, 40A, 32A, 16A). Mametraha amin'ny toerana maro kokoa miaraka amina endrika kely sy matevina ary maoderina.
Teo aloha: Manamboara US Unit EV Charger ho an'ny fiara elektrika miaraka amin'ny karazana 1
Manaraka: 16A 32A 40A 48A New Energy Electric New rindrina famolavolana mipetaka ev charger mpamily bateria fiara elektrika
mameno fiara elektrika
lozisialy ev charger
charger haingana ho an'ny fiara elektrika
Fiara mifono herinaratra haingana
charger ev haingana
Toeram-piasan'ny fiara fitateram-bahoaka
Type 1 Haavo 2 Wall-Charger EV Car Charger Wall ...